Terevhizheni inoratidza yakanangwa neMweyaPods kuseka | Ndinobva mac
Zviratidzo zveTV zvinotarisa maAirPods kuseka
Vatsva AirPods yakataurwa mune yakakosha yeSeptember 7 haisati yatengeswa asi ivo vatotonga mazana ezviitiko uye majee maererano nenjodzi yekurasikirwa izvo zviripo. Kune vanhu vazhinji vakanyunyuta pamusoro pekugadzirwa kwekupedzisira kweasina waya mahedhifoni ekambani kubva kune iyo yakarumwa apuro uye ndeyekuti idiki kukura kwayo uye kusavapo kwetambo pakati peimwe neumwe zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vanozove nezvinetso navo.
Kuonekwa kwekupedzisira kwaTim Cook mune vezvenhau kwave kuri mubvunzurudzo maakataura nezve iyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus pamwe nekuvandudza kweAirPods. Paanotaura nezve AirPods inozviita nekusimbisa zvinoita kuti tifunge kuti ivo chaizvo chigadzirwa chinoshamisa izvo zvisiri kukosheswa sezvazvinofanira kuitwa nevazhinji vashandisi.
Pasina kuenda kumberi, muchirongwa Manheru evhiki naConan O'Brien Prank shambadziro yakaratidzwa kuti inoteedzera mhando yekushambadza iyo Apple yakagadzira muna2004 pavakaburitsa maPod ekutanga aine machena earbuds aine mavara ane mavara evatambi uye mahedhifoni ane tambo chena.
Mune ino kesi, isu taida kupa chiziviso cherudzi rwakafanana asi neAirPods uye nekukanganisa kurasikirwa uko vashandisi vanozvitenga vanogona kutambura nekuda kwechimiro chavo uye saizi. Chokwadi ndechekuti, tichisiya parutivi kuti mamiriro ezvinhu atinogara navo achaita seizvi kana kwete, Kushambadzira kunosetsa uye kwakwanisa kundiwanisa kuseka kwakati, kunyanya neiyo imbwa nguva.
Pasina imwezve ado, tinokusiya iwe nevhidhiyo iyo yaratidzwa muchirongwa chatataura nezvacho:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Zviratidzo zveTV zvinotarisa maAirPods kuseka
Best Buy inomanikidzwa kunonoka kusvika kweiyo nyowani Apple Watch Series 2 uye inobhadhara avo vakaitenga
Apple Watch Series 2: Vanotsoropodza chizvarwa chino vanofungei?